भरतपुरको बहस सकियो, के आउला फैसला ? | mulkhabar.com
भरतपुरको बहस सकियो, के आउला फैसला ?
July 30, 2017 | 4:10 pm 172 Hits
काठमाडौं,१५ साउन ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान वा मतगणना भन्ने विवादमा सर्वोच्चमा बहस सकिएको छ।
निर्वाचन आयोगले पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस आज सकिएको हो । सर्वोच्चमा पेसी सर्दै लामो समय लिएको मुद्दाले आजै निकास पाउने सम्भावना देखिएको छ ।
गत बिहीबार नै बहस सकिने र आदेश आउने आकलन गरिए पनि प्रतिवादी रेणु दाहालका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि सुनुवाई आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। जेठ २१ गते सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विवाद करिव दुई महिनासम्म हुन सकेको छैन। अन्तरकालीन आदेशबाट पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय भने रोकिएको छ।
साउन २ गतेदेखि मुद्दाको मिसिल खोलिए पनि यसअघिको अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने निश्कर्षमा पुगेको थिएन।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ भइरहेको थियो।
मतगणना अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि ९० दाववढिमतपत्र च्यातिएको तथा मतगणनास्थल नै कव्जामा परेको कारण मतगणना स्थगित गरी पून मतदान गराउन निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो । पुन मतदानका लागि माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनले माग गर्दै आएको थियो भने एमालेले पुन मतदान नभई मतगणना गरिनुपर्ने जिकीर गर्दै आएको थियो । भरतपुर महानगरपालिका मतगणनाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।